ဆီးရီးယားနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၁ သန်း လက်ခံရရှိ - Xinhua News Agency
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Damascus မြို့ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် ကာကွယ်ဆေး ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော ဆီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Feng Biao နှင့် ဆီးရီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Hasan al-Ghabash တို့အားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဒမတ်စကပ်စ်၊ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဆီးရီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တစ်သုတ်အဖြစ် ကာကွယ်ဆေး ၁ သန်းကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ယင်းသည် ကပ်ရောဂါဘေးရင်ဆိုင်နေရသော ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ကိုကူညီရန် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့ပေးသော နောက်ဆုံးရောက်ရှိသည့် တင်ပို့မှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆီးရီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Hasan al-Ghabash နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Feng Biao တို့က ဒမတ်စကပ်စ်မြို့တော်ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကာကွယ်ဆေး လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ထိုသို့ခက်ခဲသောကာလတွင် ဆီးရီးယားနိုင်ငံအား ထောက်ပံ့ပေးသည့် တရုတ်နိုင်ငံ ၏ရပ်တည်ချက်ကို Ghabash က ချီးကျူးခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံ ၏ ယခုအကူအညီသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအား ရင်ဆိုင်ရာတွင် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် ကြီးစွာသော အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းနှင့် ဆီးရီးယားပြည်သူများ၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆီးရီးယားကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၏ အစီအမံများကို ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ကြောင်း’’ Hasan al-Ghabash က ၎င်းအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါမှာ ပြန့်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ကပ်ရောဂါအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ရန် နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပိုမိုရရှိရန် သံအမတ်ကြီး Feng က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အစုလိုက်အပြုံလိုက် အများအပြားပေးပို့ခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု နှင့် ဆီးရီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု လျှော့ချရေးအတွက် အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုသူတိုင်းကို ကာကွယ်ဆေးထိုးရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် လူသူများပြားသောနေရာများ၌ ဆေးထိုးအဖွဲ့များ ထားရှိထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
DAMASCUS, Jan.3(Xinhua) — The Syrian Health Ministry on Monday receivedabatch of 1 million doses of COVID-19 vaccine from China, the latest inastring of aid shipments that China has provided to help Syria in the face of the pandemic.
“This Chinese aid largely contributes in supporting the health sector in Syria in the face of this global pandemic, and is also conducive in boosting the immune system of the Syrian people and supporting the measures of the Syrian health sector in the vaccination processes,” Hasan al-Ghabash said at the ceremony.
Nowadays, medical teams set up posts at shopping malls and popular areas to facilitate the vaccination of anyone willing to take the vaccine. Enditem